World war 2 - Wikipedia
Dagaalkii Dunida II
Dagaalkii Dunida II (oo inta badan loo soo gaabiyo WWII ama WW2), oo sidoo kale loo yaqaano Dagaalkii Labaad ee Adduunka, wuxuu ahaa dagaallo caalami ah oo soconayey 1939 illaa 1945, inkastoo khilaafka la xiriira uu bilowday horraantii. Inta badan wadamada adduunka - oo ay ku jiraan dhammaan awoodda weyn - waxay soo afjareen laba xulal milatari oo ka soo horjeeda: xulafada iyo Axis. Waxay ahayd dagaalkii ugu waynaa ee taariikhda taariikhda; waxay si toos ah ugu lug lahayd in ka badan 100 milyan oo qof oo ka yimi 30 dal. Xaaladda guud ee dagaalku, ka qaybqaatayaashu waxay soo qaadeen dhammaanba dhaqaalaha, warshadaha, iyo awoodda sayniska ka dambeeya dadaalka dagaalka, oo kala soocaya farqiga u dhexeeya ilaha rayidka iyo militariga. Dagaalkii Dunida II wuxuu ahaa khilaafkii ugu cuslaa ee taariikhda bani-aadmiga, oo lagu tilmaamay 50 illaa 85 milyan oo ah dhimasho, kuwaas oo intooda badani ay ahaayeen dad rayid ah ee Midowga Soofiyeeti iyo Shiinaha. Waxaa ka mid ahaa xasuuqyada, xasuuqii Holocaust, bomin istiraatiiji ah, dhimasho biloow ah oo ka timid gaajo iyo cudur iyo isticmaalka kaliya ee hubka nukliyarka ee dagaalka.
Boqortooyada Japan waxay ujeedadeedu tahay inay xukumaan Aasiya iyo Baasifiga waxayna horay u dagaalamayeen Jamhuuriyadda Shiinaha 1937, [b]  laakiin dagaalka guud ee caalamiga ah ayaa guud ahaan la sheegay inuu bilaabay 1 Sebtembar 1939,  maalinta ee duulaankii Poland ee Nazi Jarmalka iyo tan dambe ee dagaalkii Jarmalka by Faransiiska iyo Boqortooyada Ingiriiska. Laga soo bilaabo dabayaaqadii 1939 ilaa bilowgii 1941, ololayaal taxane ah iyo heshiisyo, Jarmalku wuxuu qabsaday ama gacanta ku hayay qaar badan oo Yurubta ah, wuxuuna sameeyay Isbahaysiga Axis ee Talyaaniga iyo Japan.
Sida ku xusan Heshiiskii Molotov-Ribbentrop ee bishii August 1939, Jarmalka iyo Soofiyeetka Midawga waxay kala qaybsadeen oo ku biireen dhulal ay wadaagaan dalalka Yurub, Poland, Finland, Romania iyo Baltic. Dagaalku wuxuu u socday dhinaca u dhexeeya awoodaha Axsiyada Yurub iyo Isbahaysiga Boqortooyada Ingiriiska iyo Ingiriiska Commonwealth, ololayaal ay ka mid yihiin ololayaasha Waqooyiga Afrika iyo Bariga Afrika, Battle of Britain, ololaha qaraxyada Blitz, iyo ololaha Balkan, sidoo kale sida Bistoolada waqtiga dheer ee Atlantic. 22kii Juun 1941, awoodaha axsaabta ee yurub ayaa bilaabay soo duulimaadkii Midawga Soofiyeedka, furitaanka dhulkii ugu ballaarnaa ee taariikhda dagaal ee taariikhda, oo ku xayiray qayb weyn oo ka mida ciidamada militariga ee Axis ah dagaalka dagaalka. Bishii Disembar 1941, Japan waxay weerartay Maraykanka iyo Gobollada Yurub ee Badda Pacific, waxayna si deg deg ah ugu guuleysteen inta badan Galbeedka Baasifigga.
Axis wuxuu horay u jirey 1942 markii Japan laga badiyay Dagaalka Midig ee Midway, Jarmalka iyo Talyaaniga waxaa laga adkaaday Waqooyiga Afrika, ka dibna wuxuu si xushmad leh u ahaa Stalingrad ee Midowga Soofiyeeti.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=World_war_2&oldid=180856"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 22 Sebteembar 2018, marka ee eheed 07:15.